What Are The Benefits Of A Fold-able Dining Table? - ပွဲသဘာပတိ | ဘားမစင် | ဆိုဖာသဘာပတိ | ဘုရားကျောင်းဥက္ကဋ္ဌ | အမျိုးမျိုးသော၏ပွဲသို့စားပွဲတင် Professional ကထုတ်လုပ်မှု
ခေါ်ရန်ပံ့ပိုးမှု +86 13500254960
နေအိမ် » What Are The Benefits Of A Fold-able Dining Table?
ရောင်းရန် Banquette လက်ခံ
သတ္တု stack များရှိ
အတု Wood ကဟိုတယ်သဘာပတိ
ယနေ့ခေတ်, many foldable dining tables are particularly powerful. Some foldable dining tables have storage functions, which greatly improves the storage skills of small apartment spaces, and can also put chairs into the foldable dining tables, if necessary. Take it out and use it to enhance the space usage rate, which is particularly convenient and practical.
Adress: နိုင်ငံတာ့ထုန်ရပ် Xiluxi, Xiqiao မြို့, Nanhai ခရိုင်, Foshan, GD, တရုတ်နိုင်ငံ
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13500254960
E-mail ကို: winny@lateenfurniture.com
မူပိုင် © 2020 Foshan Lateen ပရိဘောဂ Co. , Ltd မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.